काठमाडौँ । जुम्लामा तारा एयरको विमान समान्य दुर्घटनामा परेको छ। नेपालगन्जबाट जुम्लाका लागि दिउँसो २ बजेर ६ मिनेटमा उडेको तारा एयरको ट्वीनअटर विमान अवतरण गर्ने क्रममा अगाडिको पांग्रा अर्थात् (ल्याण्डिङ गेयर) पन्चर हुँदा धावनमार्गबाट केहि बाहिर पुगेर सामान्य दुर्घटनामा परेको हो।
विमान अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट असन्तुलित भई बाहिर जाँदा आवासगृहतिरको बारमा ठोक्किन पुगेको थियो।’ विमानस्थलका अनुसार जहाज २ बजेर ४० मिनेट जाँदा अवतरण गरिएको थियो । उक्त विमानमा १८ यात्रु र ३ जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए। अहिले उनीहरु सबै सकुशल अवस्थामा रहेका छन् ।
जहाजको नोज (अगाडिको भाग) बारमा ठोक्किएर कुच्चिएको छ। नेपालगन्जदेखि जुम्लाको उडान समय २५ मिनेट हो। यस विमानका क्याप्टेन जेके निरौला थिए ।
प्रकाशित : शनिबार, जेठ २६, २०७५१६:१८
नेपालको मेट्रो रेलमा अन्तराष्ट्रिय चासो !
नाकाबाट पक्राउ पर्यो ११८ किलो सुन !
‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दै-सक्दैन’
सन्दर्भ शहीद दिवस : कति शहीद, छैन यकिन तथ्याङ्क !
७ नं मा सकियाे मतदान, राजपाका सांसदले खसालेनन् मत
भेंडा चढाउन गएका कामी मृत भेटिए